Jasmine : November 2011
Posted by စံပယ်ချို | Monday, November 28, 2011
တွေ့သမျှ မြင်သမျှ အရာအားလုံး
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, November 26, 2011
ဘ၀မှာတစ်ကြိမ်တစ်ခါ ချစ်ခဲ့ဖူးတာပေါ့ ။
ထာဝရ ရိုးသားစွာနဲ့ ကဗျာတွေဆက်ရေးနေတဲ့
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, November 24, 2011
ပျက်တာများလို့ တစ်ခါထဲ ခ၀ါချလိုက်တော့
မင်းနှလုံးသားက အမုန်းများတဲ့ သွေးစက်တွေ
ဒီဆောင်းရဲ့ နှင်းမိုးလေးနဲ့ မျှောလိုက်ပါ
ရိုးသားစွာနဲ့ အမြဲကြိုးစားပြီး ကဗျာတွေရေးနေမည့်
အားလုံးရဲ့ ထာဝရ jasmine
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, November 22, 2011
ကျေးဇူး အနန္တပါလို့
အလွမ်းကဗျာတွေ ရေးသားနေခြင်းမှာ ယခုjasmine လွမ်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ---ရင်ထဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့ စကားလုံးလေးတွေကိုကဗျာအနေဖြင့် ဖော်ပြနေခြင်း သက်သက်ဖြစ်ပါ၏မှန်ရာကိုပြောပြရရင်တော့ ဘယ်ကိုသွားသွား ဘာကိုစားစားတစ်ယောက်ထဲဆိုရင် အိမ်ကလူ ကိုလွမ်းမိပါတယ်အဲဒီ အလွမ်းသာ ရှိခဲ့(ရှိနေ)ပါ၏ ။ရိုးသားခြင်းဖြင့် ကဗျာတွေကို ဆက်လက်ရေးသားနေပါမည် ။
Posted by စံပယ်ချို | Friday, November 18, 2011
ထီးမပါ မိုးရေထဲ ကရောင်ကတမ်းထပြီးသွားပါရဲ့
စစ်မှန်သော နှလုံးသား တစ်စုံ
နယူတန် နိယာမ မှားခဲ့တာလား
အသုံးမကျ ငါ့ဘ၀ - နားကြားလွဲခဲ့တာလား
ပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကား - အများအပြား ရှိပါ၏
သစ္စာတရား - ပျက်ပါများတော့
နာကျင်ခြင်းတွေ - ဒီရေအလား။
နောက်တော့လဲ - အမဲဖျက်သလို
ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး နတ္တိ ။
စာချစ်သူ ကဗျာချစ်သူများ အာလုံးရဲ့ ထာဝရ
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, November 17, 2011
ငါ့အသဲတွေ ဝေခွဲပြီး မသုံးနိုင်သလို
မင်းကိုလဲ တစ်သက်လုံး မမုန်းချင်ဘူး
မထူးဇတ်လိုလို ပုံပြင်လိုလို မလုပ်ပါနဲ့
ရူးမတတ်ချစ်ခဲ့တာတော့ သတိနဲနဲရပေးပါ ။
အချစ် စစ်စစ်ကို အမြင်လှစေဖို့
ကာလာစုံ ဆိုးစရာ လိုလို့လား
လုံလောက်ပြီ ထင်တာပဲ ။
အနေခက်နေတာလဲ ကြာခဲ့ပြီ ။
မြူနှင်းတွေ တိမ်ခိုးတွေ အပြည့်
ဒီအပူ လူတွေသိမှာ ကြောက်လို့
တိုးတိတ်စွာနဲ့ပဲ ဆက်လက်သိမ်းထားစို့ ။
ငါ့ကို ကုသပေးတဲ့ သမားတော်တွေပါ
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေလေရဲ့ ။
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, November 15, 2011
တိမ်တွေပြိုရင် တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေမှာစိုးလို့ အဖော်နဲ့ဗျ
မောင်တစ်လုံးပုံပါပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က
သူကြိုက်နေတဲ့ ဘလော့ဂါ မလေးမွေးနေ့လုပ်တာလေတိတ်တခိုးဆုတောင်းပေးတာတဲ့
အိမ်မက်စေရာနော် သိတယ်ဟုတ် အိပ်မက်ထဲမှာတော့ ပျော်ဖို့အရမ်းကောင်းနေမှာပဲကြည့်ရတာလေ
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, November 13, 2011
ကိုကိုမောင်-ကိုဇော်-အလင်းစက်များ လူပျိုကြီးတွေပေါ့ တိုင်ပင်နေကျတာလေမိန်းမယူဖို့ကိစ္စပဲဖြစ်မှာပါ ဆရာဦးဟန်ကြည်နှင့်ဇနီးချော candy လေးပေါ့ စိတ်ညစ်လို့ပုန်းနေတာတဲ့
junemoe ဆိုတဲ့တစ်ယောက်လေ သေချာကြည့်ထား
ko2 ဆိုတာသူပဲနော် မသိဘူးဟုတ်လား သေချာမှတ်ထားပါ
နောင်အနာဂတ် ကိုရင်နဲ့ ရွှေဒိုးမိသားစုပေါ့ အားလုံးသူတို့ကလေးတွေလေ
ပျင်းတာလား ပင်ပန်းနေတာလားတော့မသိဘူးခုတလောစာတွေကဗျာတွေပျောက်နေတာ မင်းဧရာ MGTHANT.ME ရဲ့ပုံလေးပါရှင် ပန်းကတော့ဘယ်သူ့ကိုပေးမယ်မသိပါဘူးလိုချင်တဲ့ကြောင်များတန်းစီကြပါလို့--- အမျိုးကောင်းသားလေးနဲ့ ??? စဉ်းစားနေတာပါဘယ်သူလဲလို့
သတင်းသမားလေးနေဇော်လင်း သတင်းတွေနောက်လိုက်ရင်းမောလို့တဲ့ဗျာ အဖြူရောင်နတ်သမီးလေးပေါ့ကွယ် ဂျက်စမင်းနဲ့ ချစ်ရပါသော ရင်ဘတ်ထဲက မောင်
မင်္ဂလာပါ ဆရာမ Autumn နဲ့သူ၏တပည့်များ
AH တရုတ်ပြည်ကနေ သူ့အမျိုးသမီးကိုလွမ်းနေတဲ့ပုံ
လရောင်အောက်မှာ လွမ်းတယ်ဆိုတဲ့ ဖြိုး ဘ၀ရဲ့စာမျက်နှာများလေသိတယ်နော်ခရစ္စတလ်နဲ့ ဘယ်ဘူနဲ့လဲ ??? မကြာခင်ကပဲ ဖူးစာဖက်ရသွားတဲ့ မေသိမ့်သိမ့်ကျော်တို့ စုံတွဲ အပျိုးကြီးဘလော့ဂါမမတွေ အေလိုးဗစ်ကစားနေပုံ ဟိုတလောက မိုးငွေ့က အအေး၂ခွက်ကိုသူတစ်ယောက်ထဲသောက်တာတဲ့လေသူတို့ကတော့၁ခွက်ကို၂ယောက်အဲလေ ၂ကောင်သောက်တာနော်ချစ်ကြတာကိုး
kokoseinygn ဟုတ်ပါတယ်နော် ဘေးကဘယ်သူလဲ
ဒုတိယလူ(ဒုဒု)နဲ့ သူငယ်ချင်းလေ ကြွေးရှင်လာလို့ပုန်းနေတာတဲ ပျောက်နေတာ ကြာပြီ ချင်းကလေးပေါ့ဘလော့တွေလဲမတင်ဘူး လူကြီးတွေစိတ်ပူအောင်လုပ်တယ်
တီတင့်တစ်ယောက်ချက်ရပြုတ်ရ စာတွေတင်ရတာပင်ပန်းလို့ spa သွားခဲ့တာ
မောင်တစ်လုံးက စ တယ်ရှင်-ဟိုကလဲစိတ်ဆိုးတယ်ခေါ်ဘူးတဲ့
မြစ်ဆုံ(မောင်မောင်) ပုံပေါ့ ရုရှ မှာသင်တန်းတက်နေတာ ချမ်းသာပေးပါမောင်မောင်ရေ
7 am တဲ့လေ မမြင်းဖူးသူများကြည့်ထားကြပါဂျက်လဲခုမှတွေ့ဖူးတာပါ comeonkiss ပါနော်နာမည်လေးကတော့ ရင်တုန်စရာလေးပေါ့
ကြယ်ရောင်မှတ်စု (ဖိုးကြယ်)တဲ့နော် လာပြီးမိတ်ဆက်ထားပါ
ခင်မင်ရပါသော တက္ကသိုလ်မြတ်မင်းတဲ့လေ ဂျက်နဲ့ခင်တာမကြာသေးပါဘူး
ကြောင်များကိုရှာရန် ခရီးထွက်ရဦးပါမည် ထို့ကြောင့်